Tyala imali kuKlaviyo's ukuThengisa ngokuThengisa ngokuZenzekelayo namhlanje phambi kwexesha lokuThenga ngeholide | Martech Zone
Tyala imali kuKlaviyo's ukuThengisa ngokuThengisa ngokuZenzekelayo namhlanje phambi kwexesha lokuThengisa ngeholide
NgoLwesithathu, Oktobha 14, 2020 NgoLwesithathu, Oktobha 14, 2020 Douglas Karr
Kunyaka ophelileyo, ndithathe uxanduva lokuthengisa kumthengi we-ecommerce ukukhulisa ukuthengisa kwabo. Ndiyilungisile yonke imiba yendawo yabo ye-ecommerce-kule meko, Shopify. Ndiyile ngokutsha iitemplate, ndadibanisa inkqubo yemivuzo, ndongeza ukuhanjiswa kwendawo, ndathatha iifoto zemveliso ezintsha, amaphepha emveliso anyuselweyo… kwaye ndonyusa amazinga abo okuguqula kabini.
Nje ukuba ndikwazi ukuqinisekisa ukuba indawo isebenza ngokukuko kunye nokusebenza kokuhanjiswa kokusebenza, ndifuna ukusebenza ekwandiseni ingeniso iyonke. Ukuphumeza isisombululo sentengiso esizenzekelayo esathumela nge-imeyile okanye kubathengi abathengi kwaye sibakhuthaza ukuba bagqibe ukuthenga okanye babarhwebeshele ekubeni baqale iodolo entsha kwakubalulekile.
Ngelishwa, izixhobo zikaShopify ziyasilela apha. I-Shopify inakho ukwenza ngokwezifiso ukuthengwa kweenqwelo zokuthenga kunye nezinye ii-imeyile - kodwa akukho bulumko okanye ingxelo eyomeleleyo ejikeleze bona. Umzekelo, bendingenandlela yokwahlulahlula kunye nokuthumela izibonelelo ngokusekwe kwimbali yokuthenga okanye ezinye iimpawu zomthengi.
IKlaviyo Ecommerce yokuThengisa ngokuZenzekelayo
Emva kokwenza uphando kwi-intanethi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndivavanye Klaviyo. Kwisithuba seyure, ndiye ndaguqula ukuhamba kwabo okuthengisa okuzenzekelayo ukwamkela abathengi abatsha, izikhangeli ezilahliweyo ezingakhange zongeze izinto kwinqwelo, abathengi abashiye inqwelo yokuthenga, ukubuyela kubathengi kunye nokuthengisa / ukuthengisa okuzenzekelayo okwenziwe ngokwezifiso nokuthumela.
Ukudityaniswa kukaKlaviyo kunye Shopify inomtsalane. Iyakwazi ukunxibelelana no-Shopify kunye nokwetyisa yonke idatha yabathengi, kwaye kwangoko iphumeze ukuhamba okuphuculweyo. Kwinyanga yokuqala, unxibelelwano endilwenzileyo ndaza ndalakha ndisebenzisa umrhumo wokudonsa kunye nolahla i-imeyile (i-Shopify ayinayo) imbuyekezo kutyalo-mali lwe-2286% yexabiso lenkqubo. Hayi… andidlali apho.
Ukudityaniswa kukaKlaviyo kunye noShopify kusivumela ukuba sisebenzise ngokungagungqiyo nangokufanelekileyo isicwangciso sethu sentengiso yedijithali nokuba kukuziphatha ngokwahlulahlula abathengi rhoqo, ukuvelisa okukhokelayo okanye ukuhamba okuzenzekelayo.
UMike, uMphathi weBrand yeBobo
NgeKlaviyo kunye ne-Shopify, ungaqala ukuthumela unxibelelwano lomntu siqu, olujolise ngcono kumcimbi wemizuzwana. I-Klaviyo iqokelela kwaye igcine yonke idatha efanelekileyo malunga nabathengi bakho ukuze uyisebenzise ukuzisa amava angalibalekiyo, ukuqhuba ukuthengisa ngakumbi, kunye nokwenza ubudlelwane obomeleleyo.
I-Klaviyo's Shopify Ecommerce Integration ibandakanya
Dashboard Ngaphandle kokuzenzekelayo kwentengiso, iKlaviyo ibonelela ngedashboard ye-e-commerce eyomeleleyo enokwenziwa ukuba ibe yeyakho ngokupheleleyo kwaye ibonelele ngazo zonke iinkcukacha kwivenkile yakho yakwaShopify ngexesha langempela.
Ukuhamba kokuZenzekelayo kweNtengiso -Ukuqala kokuhamba ngokusekwe kwimihla, iminyhadala, ubulungu kuluhlu, okanye ubulungu becandelo kunye nokusebenzisa ukwahlulwa, izihluzo, iimvavanyo ze-A / B, nokunye okunokujolisa kunye nokwandisa. Qalisa ngokukhawuleza ngelayibrari ye-Shopify-specific automation kunye neempendulo ze-imeyile.
Buyela kwiZilumkiso zeSitokhwe -Iphuma kwiimveliso zesitokhwe azisekho kwintengiso elahlekileyo. Vumela abathengi babhalise kwizilumkiso xa izinto zibuyile kwisitokhwe- kulula oko.
Iingcebiso zoMkhiqizo oCwangcisiweyo -Ukusebenziseka ngokulula, iingcebiso ngemveliso yokuseta zero ngokusekwe kubakhangeli babathengi, kunye nembali yokuthenga.
amaphulo -Akudingi ukuba uthumele nje ukuthengisa okuzenzekelayo, ungathumela i-imeyile okanye umkhankaso wemiyalezo ebhaliweyo nanini na xa ungathanda nokuba leliphi na icandelo ongathanda kulo.
Uvavanyo lwe-A / B -Uvavanyo lweelayini zemixholo ye-imeyile kunye nomxholo ngokulula ngokuthe ngqo ngaphakathi kwintengiso yokusebenza ngokuzenzekelayo.
Icandelo loMthengi Chaza amacandelo ngaphandle kwemida. Sebenzisa nayiphi indibaniselwano yeziganeko, iipropati zeprofayili, indawo, amaxabiso axeliweyo, kunye nokuninzi… nangaliphi na ixesha.
Iikhuphoni ezinamandla -Thumela ngokulula amatikiti athile kubathengi bakho.
Amaphepha okukhetha -Brand kwaye wenze ngokwezifiso i-imeyile yakho ephendulayo kunye namaphepha okhetho lwabathengi abahambahambayo.
Kukubhadla okungeyonyani -Uqikelelo olwenziwe ngokuzenzekelayo lwexabiso lobomi, umngcipheko we-churn, isini, ixesha elifanelekileyo lokuthumela, kunye nebhokisi yezindululo zemveliso ezizezakho.
Intengiso ye-Ecommerce Lifecycle -Thumela iifom ekujoliswe kuzo, ezinophawu lokwakha uluhlu lwakho lokuthengisa. Emva koko, thetha abathengi ngeendlela ezininzi kwaye usebenzise ukuqikelela ukulindela i-churn okanye ukujolisa kubathengi bexabiso eliphezulu.
Ukuphuculwa kwedatha yemveliso- Vumelanisa ngokuzenzekelayo iimpawu zemveliso ekuphumeni, uku-odola imicimbi, kunye neerekhodi zekhathalogu.
I-SMS - Lungiselela isahlulo esinamandla sikaKlaviyo kunye noomatshini bokuzenzekelayo ukwenza wonke umyalezo obhaliweyo. Ukulawula imvume kulula kwaye kuyazenzekelayo ukuqinisekisa ukuba imiyalezo ithunyelwa kubantu abalungileyo.
Qalisa ngeKlaviyo simahla!
UKlaviyo unqakraza kanye kwi-Ecommerce Integration
I-Klaviyo ine-70 eyakhelweyo eyakhelweyo ngaphambili, ukudityaniswa konqakrazo olunye kunye nee-API ezivulekileyo zokuqinisekisa ukuba unokufumana idatha yedatha yakho kwiKlaviyo ngaphandle kobunzima. Ukudityaniswa kwe-ecommerce evelisiweyo iyafumaneka ukuze unyuse kwaye usebenzise ngokukhawuleza usebenzisa:
Shopify kunye ne-ShopifyPlus
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco obulungu kweli nqaku.
tags: ukuhamba ngokuzenzekelayoukukhangela ukushiyaCLVixabiso lokuphila kwabathengiezorhwebo aiuqoqosho oluzenzekelayoI-imeyile yokuthengisa ngokuthengisa i-imeyileIdeshibhodi yedesktopImikhankaso ye-imeyile ye-ecommerceIsahlulo se-ecommerceecommerce wamkela imeyileukuvavanya i-imeyileKlaviyoMagentoukuthengwa kwangaphambiliIvenkile yokuvavanyathenga amakhuphoniIvenkile yokuthengisa ngokuzenzekelayoivenkileii-sms zokuzenzekelayoizilumkiso zesitokhwewoocommerce
Ukujolisa kumxholo: Ukwakha uKhuseleko lweBrand kwiXesha elingenaCookie